एयरएशिया : कसरी भयो अर्बौं डलरको कम्पनी ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय एयरएशिया : कसरी भयो अर्बौं डलरको कम्पनी ?
on: April 14, 2019 अन्तरराष्ट्रिय
एयरएशिया : कसरी भयो अर्बौं डलरको कम्पनी ?
काठमाडौं । एयरएशिया विश्वकै उत्कृष्ट सस्तो विमान सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये एक हो । विमान कम्पनीहरूको समीक्षा गर्ने बेलायती कम्पनी स्काइट्र्याक्सले झण्डै दर्जनपटक यसलाई सस्तो विमान सेवा उपलब्ध गराउने विश्वकै उत्कृष्ट कम्पनी घोषित गरेको छ । कुनै बेला टाट पल्टिसकेको कम्पनीले अहिले १ वर्षमै अर्बौं डलर कमाइरहेको छ । कम्पनीलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन एयरएशियाका सीईओ टोनी फर्नान्डेजको ठूलो भूमिका छ । कम्पनीको कायापलट गरेर टोनीले आफूलाई ‘पुनरुद्धारको गुरु’ नै सावित गरिसकेका छन् ।
अमेरिकी बहुराष्ट्रिय म्युजिक कम्पनी वार्नर म्युजिक शीर्ष कार्यकारीको रूपमा सफल टोनीले सन् २००१ मा वायु सेवा उद्योगमा हात हाल्ने निर्णय गरे । यसअघि उनीसँग यो क्षेत्रमा काम गरेको कुनै अनुभव नै थिएन । टोनीले कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको कम्पनीको सबै कर्जा तिरिदिए अनि २६ सेन्टमा कम्पनी किने । त्यसको १ वर्षभित्रै उनले कम्पनीको पुनरुद्धार गर्दै केही वर्षभित्रै कम्पनीलाई नाफामा पनि पुर्‍याए । अहिले कम्पनीको वार्षिक कमाइ नै २ अर्ब डलरभन्दा धेरै छ । टोनीले कम्पनी किन्दा कम्पनीसँग दुई थान बोइङ ७३७ जेट र २ सय ५० कर्मचारी थिए भने यसले एउटा रूटमा मात्रै उडान गर्थ्यो । १ करोड १० लाख डलरको कर्जा पनि कम्पनीमाथि थियो ।
तर, सन् २०१८ मा कम्पनीको आम्दानी १० अर्ब ६० करोड रिंगिट (२ अर्ब ५८ करोड डलर) थियो । असफल भइसकेको कम्पनीलाई उनले अर्बौं डलरको कम्पनीमा कसरी परिणत गरे ? यो प्रश्न धेरैको मनमा आउन सक्छ । सीईओको रूपमा उनको सबैभन्दा ठूलो शीप के हो भनेर सोध्दा टोनी सधैं एउटै कुरामा जोड दिन्छन्, राम्रा मानिसहरू पत्ता लगाउने आफ्नो क्षमता । ‘मलाई लाग्छ कि मेरो सबैभन्दा ठूलो शक्ति (मसँग केही छ भने) भनेको राम्रो मान्छे खोज्न सक्नु नै हो,’ हालै सिंगापुरमा आयोजित मनी २०२० नामक सम्मेलनमा उनले भने ।
सन् २०१८ मा स्काइट्र्याक्सले लगातार १०औं वर्ष पनि एयरएशियालाई विश्वकै उत्कृष्ट सस्तो हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी घोषित गरेको थियो । एयरएशियामा शुरुआती दिनयता फर्नान्डेजले कर्मचारीको संख्या दोब्बर बनाएका छन् । अहिले कम्पनीले २ सय ५० थान विमानबाट २० हजारभन्दा धेरै अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालमा उडान गरिरहेको छ । यस क्रममा ‘कम्युनिकेशन स्किल’ राम्रो भएको र मैले यही नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बलियो भएका कर्मचारीको खोजीलाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको फर्नान्डेज बताउँछन् ।
‘म सधैं केही गरेर देखाउने इच्छा शक्ति भएका मानिसहरू खोज्ने गर्छु,’ फर्नान्डेज भन्छन् । यो शीप विशेषगरी कम्पनीको नयाँ मोइबाल भुक्तानी एप बिग पेको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यावसायिक साझेदार खोजी गर्दा उपयोगी रह्यो । लन्डनको एक बारमा व्यवसायी क्रिस्टोफर डाभिसनलाई भेट्दा फर्नान्डेज उनको धैर्य र दृढ निश्चयबाट निकैै प्रभावित भएका थिए । पछि फर्नान्डेजले उनै डाभिसनलाई बिगपेको सहसंस्थापक र सीईओ बनाउने निर्णय गरे ।
तर, राम्रा मान्छे खोज्नु सीईओले गर्नुपर्ने विभिन्न कामको एउटा मात्रै अंश हो । यी मानिसलाई लामो समयसम्म कम्पनीमा टिकाउन झन् कठिन छ । तर, यसका लागि पनि फर्नान्डेजले विशेषगरी तीनओटा कुरामा ध्यान दिन्छन्, र ती हुन् पारदर्शिता, प्रशंसा र कर्मचारीको वृद्धि विकासको सम्भावना । ‘धेरैजसो कम्पनी आफूसँग भएका राम्रा कर्मचारीको वास्तविक मूल्य महसूस नै गर्दैनन्,’ उनी भन्छन् । तर, कर्मचारीको मूल्य पहिचान गर्ने मामिलामा आफूहरू निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । एयरएशिया ठूलो कम्पनी भएर पनि त्यहाँ कुनै कर्मचारी संगठन नै छैन ।
कम्पनीको सीईओ भइसकेपछि आफ्ना कम्पनीमा काम गरिरहेका कर्मचारीको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । बेलाबेलामा उनीहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुपर्छ । अनौपचारिक पहिरन लगाउने अनि कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुको अर्थ उनले राम्ररी बुझेका छन् । सधैंजसो उनलाई कर्मचारीहरूको सयौं म्यासेज आउँछ । ‘सबै उद्यमी, सीईओहरू मलाई सबै थाहा छ भन्ने सोच्छन्, तर कहिलेकाँही आफ्ना वरिपरि भएका मानिसको कुरा पनि सुन्नुपर्छ,’ फर्नान्डेज भन्छन् ।
(२०७५ वैशाख १ गते प्रकाशित यो समाचारको प्रिन्ट संस्करणमा ‘टोनीले कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको कम्पनीको सबै कर्जा तिरिदिए’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।)